Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air India: N'ikpeazụ na -aga?
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Ọ dị ka ihe na -aga n'ihu n'ikpeazụ n'okwu dị mkpa banyere onye ga -enweta ma na -elekọta Air India, nke gọọmentị ga -aghasa.
Ndị ọchụnta ego itinye ego na -apụta n'ikpeazụ maka ụgbọ elu Air India nwere nsogbu.
Ọ dịla ọtụtụ afọ ịnwa ire ụgbọ elu mba ahụ, na -egbochikwa mbọ maka ihe dị iche iche na ihe dị iche iche.
Ka nọ n'ọdụ ụgbọ mmiri, nnukwu mfu nke ụgbọ elu ahụ - dịka onye ga -ejikwa ha - onye zụrụ ahịa ọhụrụ ka ọ bụ gọọmentị?
Tata Sons, nke hiwere Ụgbọ elu Air India na 1932 wee si na ya pụta na 1953, bụzịkwa onye na -enye ụgbọ elu ụgbọ elu, ọ tinyekwala akwụkwọ ntinye ego yana ụfọdụ ndị ọzọ na -ere ahịa.
Onye isi oche SpiceJet, Ajay Singh, enyekwala onyinye, ụfọdụ ego itinye ego esonyekwara Singh na ntinye akwụkwọ iji chekwaa ụgbọ elu ahụ. Singh abụrụla onye ama ama na ngalaba ụgbọ elu afọ ole na ole ugbu a, yana ọrụ ya ugbu a A na -ekiri Air India na nnukwu mmasị.
Mwepu nchekwa na idozi ọnụ ahịa ịre ahịa bụ akụkụ abụọ dị mkpa gọọmentị kwesịrị idozi. Ihe ndị ọzọ na -echegbu bụ ajụjụ gbasara otu esi eme nnukwu mfu nke Air India chịkọbara kemgbe ọtụtụ afọ, yana ka aga -esi emeso akụ ndị ọzọ nke ahịrị Maharaja, gụnyere ezigbo ụlọ ya na nchịkọta nka. Ijikwa ala na nri ikuku abụwokwa ihe na -echegbu onwe ya kemgbe ekwuputara okwu nsị.
N'ime afọ ole na ole gara aga, a nwara ọtụtụ ugboro ire onye na -ebu ụgbọ ala, mana agbanyeghị mbọ ndị ahụ maka ihe dị iche iche. Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ ka esi aza ajụjụ nke onye ga -eme nnukwu mfu - onye zụrụ ahịa ọhụrụ ka ọ bụ gọọmentị?
Okwu ndị ọrụ abụrụla ebe nsogbu ọzọ, yana ajụjụ dịka onye onye zụrụ ahịa ga -ejigide ya, onye ka a ga -achụpụ? Ndị otu na ndị otu nọ n'otu oge na -achọsi ike ịza ajụjụ, ha na -echekwa echiche ịjụ ọnụ.
Ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ dị, nke ndị na -azụ ahịa si mba ọzọ bụkwa ebe mkparịta ụka, mana ugbu a ọ dị ka ndị na -ebubata ego ebuputara ọnụ ahịa ego n'ụdị ntinye aka Tatas na Ajay Singh.
September 19, 2021 na 07: 47
Ama m na ọ bụghị maka na m chọrọ ịnọnyere gị. Achọghị m. Mgbe ụfọdụ ọ na -adị m ka m kwesịrị ịnọnyere gị, dịka m kwesịrị inweta mmerụ ahụ ị na -ewetara m n'ụzọ dị mfe. “Lee, ọ bụrụ n'ezie na ị chọrọ ịga n'ihu mgbe oge a niile gachara, ịkwesịrị ịgbaghara ya maka ihe mgbu ọ kpatara gị, n'agbanyeghị ma gị.